प्रचण्डको बोलीको काउन्टरमा अब ‘राधिका आमा’ – PathivaraOnline
Home > विचार > प्रचण्डको बोलीको काउन्टरमा अब ‘राधिका आमा’
admin February 21, 2021 February 21, 2021 विचार, समाचार	0
प्रचण्डले केपी ओलीलाई निसन्तान भन्दै जुन असामाजिक ढंगले आक्रमण गर्नुभएको छ त्यसको सबैले भत्र्सना गर्न जरुरी छ । सभ्य समाजमा यस्तो टिप्पणी गरिँदैन । केपी ओली र प्रचण्डमा को परिवारवादी ? केपी ओलीका नातागोता आफन्त र प्रचण्डका नातागोता आफन्त कहाँकहाँ कस्तो अवस्थामा छन्, केके लाभ लिएका छन् भन्ने तुलना गरेर हेरे धेरै कुरा छर्लङग हुनेछ ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिको काउन्टरमा अब सर्वसाधारणले राधिका शाक्यलाई पनि ‘राधिका आमा’ भन्ने अभियान चलाउन सक्छन् । त्यसबेला प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको जवाफ के हुने होला ?
कृष्ण थापाको लेख सनराइजखबरबाट साभार गरिएकोमा क्षमाप्रार्थी छाैं ।